Ra’iisul Wasaare ku xigeenka oo wali kulamo la leh waxgaradka Hiiraan
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa Magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa uu ka wadaa kulamo kala duwan oo ku aadan in waxgaradka gobolka Hiiraan ay aqbalaan in ay ka qeyb galaan shirka ka socda magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe.
Ra’iisulwasaare ku xigeenka dowladda Soomaaliya ayaa xalay kulamo kala duwan la qaatay qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Hiiraan , waxaana lagu soo waramaya in Qaar ka mid ah qodobada uu soo bandhigay Ra’iisulwasaare ku xigeenka in ay aqbaleen Qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Hiiraan.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa Waxgaradka Gobolka Hiiraan ka codsaday in ay ogolaadaan xildhibaanada ka imaanaya Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe in lagu soo xulo Magaalada Muqdisho, inkastoo arintaas uu Ugaas Xasan uu ka biyo diiday.
Waxgaradka Gobolka Hiiraan ayaa diiday in ay Warbaahinta u soo bandhigaan waxyaabihii ka soo baxay kulan ay shalay wada qaateen Ra’iisul Wasaare ku xigeenka iyo Wafdigiisa.
Maxamed Cumar Carte oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo in waxgaradka gobolka Hiiraan in ay aqbalaan in ay ka qeyb galaan shirka ka socda magaalada Jowhar ee xarunta Gobolka Shabeelaha Dhexe.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa dhawaan gaaray magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si uu waxgaradka gobolka Hiiraan uga dhaadhiciyo qodobo dhowr oo ay ku diidan yihiin dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka loo dhisaayo Hiiraan iyo sidoo kale Shabeelaha Dhexe.